Booliska Nigeria oo soo badbaadiyey 100 qof oo la afduubtay
Booliska iyo maamulada dowladda ee Nigeria ayaa xaqiijiyay sii deynta 100 qof oo ay ku jiraan caruur, iyo haween kuwaas oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed Nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay afhayeenka booliska maxalliga ah.
Nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubeysan iyo afduubyo madaxfurasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi-galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada oo loo daad-gureeyey ay la daalaa dhacayaan xakameynta kororka burcadda hubeysan.
Mohammed Shehu oo ah afhayeenka booliska gobolka Zamfara ayaa qoraal uu u diray Reuters ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8-dii June deegaanka Manawa ee gobolka Zamfara. Waxa uu sheegay in ay suurtogeliyeen in dadka la sii daayo “iyadoo aan la bixin faa’iido dhaqaale iyo mid maaddi ahba.”
Inkastoo gobollada waqooyi-bari ee Nigeria ay toboneeyo sano wajahayeen qalalaaso amnio o ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay Boko Haram, mowjadaha afduubyada ee hadda sii badanaya ayaa intooda badan ah kuwa dhaqaale lagu doonayo.